Leading the Charge in Myanmar’s Evolving Banking Landscape | Myanmar Business Today
Home Business Local Leading the Charge in Myanmar’s Evolving Banking Landscape
Leading the Charge in Myanmar’s Evolving Banking Landscape
In 27 years of operations, CB Bank has opened over 230 branches, making it one of Myanmar’s leading companies. It has also pioneered many of the country’s ‘firsts’.
We recently sat down with the bank’s managing director, U Thein Zaw Tun, to talk about CB’s operations and products, the challenges and prospects in the banking industry, and what we can expect in the coming months and years.
Armed withaBBA from Bangkok’s Assumption University and an MBA from Birmingham University, England, he is in charge of the bank’s retail banking, prestige banking, SME banking and corporate banking as well as its corporate strategy.
Can you tell us about the products offered by your bank?
In retail banking, we offer various services to customers through around 250 branches, both physical and online. In business banking, we offer services such as remittance locally and internationally to streamline payments and loans for SMEs. Moreover, we also have products such as loans to meet the needs of local and international corporations and other products for exporters and importers. In addition to retail and corporate banking customers, we are also offering consulting services for personal and business banking. We are the first bank to introduce and offer international core banking service and also the first bank to offer online banking and mobile banking, as well as card payment methods.
Any challenges in providing online services?
We have plans to make announcements on online banking. At the moment, it is difficult to have talents and experts in the industry. Anyway, we are committed to offer better services and technological solutions.
What weaknesses do you see in local banks?
The banking industry, which had no activity between 2000 and 2010, has been developing at the annual rate of 20-30 percent in the last decade. Despite the weaknesses, the industry did grow fast. It has grown intoaposition where it can compete with neighboring countries to some extent. We now offer financial services to big companies as well as technological services to growing local companies.
People in Myanmar are still usingalot of cash. To reduce the use of cash, we need to make improvements in cash management of the business as well as trade financing and treasury. The government has also approved new banks and is planning to allow more foreign banks into the market.
What do you think of the government’s plan to bring in more foreign banks?
There will be more foreign investments in the future. Having foreign banks here is good for the country, and we at CB Bank welcome foreign banks. When they come in, they will bring technology and collaborate with local banks, which means there will be technology transfer. Local private banks have been partnering with foreign banks since 2012-2013. CB Bank establishedastrategic partnership in collaboration with the world’s leading Japanese bank, MUFG, in 2012. We are also providing banking services in partnership with other foreign banks. Foreign banks’ entry into the domestic banking sector will be followed by foreign direct investments. Since the country is trying to strengthen the financial market, the role of the citizen-owned banks will be broader than ever.
To go toacashless system, what do you think needs to be done?
Real Time Gross Settlement System (RTGS), implemented by the Central Bank of Myanmar in collaboration with JICA, is now reaching Phase 2. When it is completed, cashless payments will be more effective and successful, allowing people to conduct online transactions and point-of-sale payments.
What do you think of the inflation in the country?
The government is trying to transform the financial policy intoabetter position. For example, the Central Bank of Myanmar sells treasury bonds instead of printing more cash in order to satisfy the budget needs. Thanks to these efforts, the local currency is quite stable. Myanmar is not strong in exports and production and depends on imports. We hope the government will support exporters more in order to cut the trade deficit. CB Banks has plans to support exporters.
The government is committed to improving payments to replace cash. However, the population is more familiar with cash and the number of people who haveabank account is quite low. So, to what extent should local banks try to participate in realizing the government’s ambitions?
We are seeing an upward trend with more and more people using banking services. Mobile banking usage has doubled. We will try to implement real time gross settlement and to cross-transfer between different bank accounts at different banks.
Now Facebook is working on creatingadigital currency called Libra. What do you think of that?
Blockchain isatechnology that can be used not only in the financial sector but in other areas as well. Libra and Bitcoin are digital currencies that use blockchain technology. Libra is not recognized by central banks. It is being tested by some banks in China, Singapore and the U.S. as an official currency. It is quite early days for Myanmar.
The next question is, what are the challenges facing the local banking industry and for CB Bank, which has madealot of changes?
The government has started adopting international-standard regulations for the development of the banking industry, and private banks need to change and adapt to be in line with the new regulations. There are indeed some challenges, such as the difficulty in acquiring talent. CB Bank has employed expatriates and provided capacity-building training for local employees.
Local banks are now focusing on loan services including SME loans, home loans and installment loans. What are CB Bank’s future plans?
CB Bank has been providing SME loans, home loans and installment loans foralong time. We have partnered with international organizations such as KfW and JICA to provide loans and financing. Moreover, we also provide Credit Guarantee Insurance Loan for SMEs in collaboration with Myanma Insurance.
Are there any additional comments you would like to make on the economy based on your experience?
Personally, I believe that the country’s economic development is going in the right direction. Its GDP growth rate, although moderate, is higher than other ASEAN countries’. We see that the Central Bank of Myanmar is adopting plans for strong and holistic economic growth. I think it is going in the right direction. As for us, we are committed to keeping abreast with the international market.
“ ဘဏ်လောက ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် အတွင်းမှာ တစ်နှစ် ကို ၂၀-၃၀% နီးပါး တိုးတက်ခဲ့တယ်” လို့ ဆိုတဲ့ CB Bank ရဲ့ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသိန်းဇော်ထွန်းနဲ့ မေးမြန်းခြင်း
၂၇ နှစ်တာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်လာပြီး ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၂၃၀ ကျော်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငရဲ့ အကြီးဆုံးဘဏ်တွေထဲတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ CB Bank နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းခဲ့သမျှကို ဒီတခေါက် ဖော်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။ အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက် ချေးငွေထုတ်ပေးတာအပြင် အခြားချေးငွေပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ နည်းပညာပိုင်းမှာ ရှေ့ရောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ ထိပ်တန်းဘဏ်တွေထဲမှာလည်း CB က ပါဝင်ပါတယ်။ CB ရဲ့ လတ်တလောဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်း ၊ ပြည်တွင်းဘဏ်တွေကို ခြုံငုံမိစေတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်း၊ ဘဏ်လောကအနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့ အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CB ရဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးသိန်းဇော်ထွန်းကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ Assumption တက္ကသိုလ်က BBA ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Birmingham တက္ကသိုလ်က (MBA) စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့လည်း ရရှိထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာဘဏ်ရဲ့ ကော်မတီဝင်အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး CB Bank ရဲ့ Retail Banking ၊ Prestige Banking၊ SME Banking နှင့် Corporate Banking sector ၄ ခု အပါအဝင် စတဲ့ Business အပိုင်းတွေကိုဦးစီးနေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ၊ ဘဏ်ရဲ့ ရှေ့ဆက် သွားမယ့် Strategy ပိုင်းကိုလည်း ဦးစီးနေသူပါ။ သူနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့မေးခွန်တွေတိုင်းကို ဘက်စုံထောင့်စုံကအသေးစိတ်ဖြေထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ CB Bank က ပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း အသေးစိတ်လေးပြောပေးပါဦး ။
Retail banking ပိုင်းအနေနဲ့ တစ်ဦးချင်း Customer တွေအတွက် ဘဏ်ခွဲပေါင်း၂၅၀ ခန့်ကတဆင့် မျိုးစုံ ပေးနေပါတယ်။ Online ကလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ Business အပိုင်းမှာ ဆိုရင် SME တွေနဲ့ ချေးငွေ အပိုင်းနဲ့ ငွေပေးချေမှု ချောမွေ့စေဖို့အတွက် ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ Remittance နဲ့ ပြည်တွင်းငွေလွှဲမှုတွေ ပေးနေပါတယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပလုပ်ငန်းကြီးတွေအတွက် ချေးငွေတွေ၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းတွေအတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေပါတယ်။ Retail နဲ့ Corporate Banking Customer တွေအပြင် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့Personal and Business Banking ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုလည်း အကြံပြုဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ Core Banking ကို ပထမဆုံး ဝန်ဆောင်မှု ပေးခဲ့တဲ့ ဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ Online Banking နဲ့ Mobile Banking၊ Card နဲ့ ငွေပေးချေမှုတွေကို ပထမဦးဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ဘဏ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းအသုံးပြုတဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေလဲ။
လက်ရှိ တွေ့ရတဲ့ Online Banking နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိပေးကြေညာချက်တွေ လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ နည်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ Talent တွေ expert တွေကို ရှာဖွေတာ ခက်ခဲနေပါသေးတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ နည်းပညာ
ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးဆောင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသွားပါမယ်။
ပြည်တွင်း နိုင်ငံသားပိုင်ဘဏ်တွေ အတွက် ရှိနေဆဲအားနည်းချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မယ် ထင်သလဲ။
ဘဏ်လောက ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် အတွင်းမှာ တစ်နှစ် ကို ၂၀-၃၀% နီးပါး တိုးတက်ခဲ့တယ်။ ဘဏ်လောက ဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ် အစပိုင်းက စတင် ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်လောက ဟာ
ငြိမ်သက်ခဲ့တယ်။ ဒီ၂၀၁၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ကနေ စပြီးတော့ ဘဏ်လုပ်ငန်း တွေဟာ ပြန်လည်ဦးမော့လာပြီးတော့ တစ်နှစ် ကို ၂၀-၃၀ % တိုးတက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လိုအပ်ချက်တွေရှိပေမယ့် တိုးတက်လာတာ ကို တွေ့ရတယ်။ အာဆီယံအတွင်းက အခြားဘဏ်တွေနဲ့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ယှဉ်လာနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ လုပ်ငန်းကြီးတွေကို ချေးငွေတွေ ပေးလာနိုင်တယ်။ FDI လုပ်ငန်းကြီးတွေကို ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကြီးမားလာတဲ့ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပါ နည်းပညာ နဲ့ဝန်ဆောင်မှု ပေးလာတာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငွေသားသုံးစွဲမှုတွေများပြားနေပါသေးတယ်။ ငွေသားသုံးစွဲမှု လျှော့ချဖို့ဆိုရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ Cash Management အပိုင်းကဖြစ်စေ Trade Finance နဲ့ Treasury ပိုင်းမှာလည်း တိုးတက်လာအောင် ကြိုးစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်သစ်တွေကို ခွင့်ပြုထားတယ်။ နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေကို ပိုပြီးခွင့်ပြုပေးသွားဖို့ အစိုးရအနေနဲ့ စီစဉ်လာတာလည်းရှိလာတယ်။ နိုင်ငံခြားဘဏ်သစ်တွေ ထပ်ခွင့်ပြုသွားဖို့လဲရှိပါတယ် ။
အဲဒီအခြေအနေကရောဘယ်လိုလဲ။ အဲဒီလိုပဲ ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းတွေလို လုပ်ကိုင်ခွင့်တွေ ထပ်ပေးသွားဖို့အစိုးရအနေနဲ့ အစီအစဉ်ရှိထားတဲ့အပေါ် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ ။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ပိုမို များပြားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်လာတာကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ CB Bank ကလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေ
ဦးဆောင်ပြီး နည်းလမ်းအသစ်တွေယူလာပြီး local bank တွေ နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး Technology Transfer ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၂/၂၀၁၃က စတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဟာ နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ CB Bank ကလည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကစပြီး ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အဆင့်ရှိတဲ့ ဂျပန်ဘဏ် MUFG Bank နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ Strategic partnership ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံခြားဘဏ်တွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုတွေ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေ ဝင်လာတဲ့ အတွက် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်း ပိုပြီးဝင်ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Financial Market ကိုပိုကြီးလာအောင်ဆောင်ရွက် နေကြတဲ့အတွက် နိုင်ငံသားပိုင်ဘဏ်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အရင်ကထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာနည်းတူ Cashless စနစ်ဖော်ဆောင်ဖို့ ပြည်တွင်းမှာ လိုအပ်ချက်က ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လို့မြင်လဲ ။ ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုလဲ။
လက်ရှိအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (CBM) က JICA နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ Real Time Gross Settlement System(RTGS) ကိုဆောင်ရွက်နေတာ အခုဆိုရင် Phase-2 အဆင့် ကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။ RTGS အစီအစဉ်ပြီးမြောက်သွားရင် Cashless Payment က အရင်ကထက်ပိုမိုတိုးတက်အောင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ (၂၄) နာရီလုံး ငွေသား ကိုင်ဆောင် စရာမလိုဘဲ Online Transaction နဲ့ POS Payment တွေကိုပိုမိုမြန်ဆန်ချောချောမွေ့မွေ့ ပေးချေနိုင်တော့မှာပါ။
ကျပ်ငွေတန်ဖိုး၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု အပိုင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော လက်ရှိအခြေအနေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ ။
နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေနဲ့လည်း ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ Policy တွေကို ပိုမိုခိုင်မာအောင် ကောင်းမွန်စွာပြောင်းလဲနေတာကို တွေ့ ရတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ဗဟိုဘဏ် ရဲ့
ယခင်ငွေသားရိုက်ထုတ်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ စနစ်ကနေပြီးတော့ Treasury Bonds တွေကို ရောင်းပေးနေတဲ့ စနစ်ကို သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပြောင်းလဲလာတွေ ကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျပ်ငွေတန်ဖိုးဟာ တည်ငြိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ ပို့ကုန်၊ထုတ်ကုန်အားနည်းနေပြီးတော့ သွင်းကုန်ကို အခြေခံနေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် (Trade Deficit) ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ပိုမိုထောက်ပံ့မှုတွေ ပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ CB Bank အနေနဲ့လည်း ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်။
အစိုးရကခုဆို ငွေကြေးစနစ်ကို ငွေစက္ကူအစား Payment စနစ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း မြန်မာလူထုဟာ ဘဏ်အသုံးပြုမှုတောင် နည်းနေသေးတဲ့အခြေအနေဆိုတော့
ဒီလိုစနစ်ဖော်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာရော ဗဟိုဘဏ်အပြင် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေက ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ ပူးပေါင်းသင့်လဲ။
ဘဏ်အသုံးပြုသူ လူဦးရေဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် သိသိသာသာတိုးပွားလာတာကို တွေ့ရတယ်။ Mobile Banking အသုံးပြုသူ ဟာလည်း ၁၀၀% တိုးတက်လာကို တွေ့ရပါတယ်။ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချဖို့အတွက်
ဘဏ်အချင်းချင်း ငွေပေးချေမှုတွေ မတူညီတဲ့ ဘဏ်အကောင့်တွေကနေပြီးတော့ တခြားဘဏ်များ ကို Transfer လုပ်ဖို့နဲ့RTGS တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသွားပါမယ်။
နည်းပညာအပြောင်းအလဲတွေအရ နိုင်ငံတကာအထိ ခြုံငုံမိလာစေနိုင်တဲ့ Digital Currency တစ်ရပ်ကို မြန်မာလူထုအသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Facebook ကလည်း Libra ဆိုတဲ့ငွေကြေးစနစ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုတာကရော ၊ အားသားချက်တွေ အားနည်းချက်တွေဘယ်လိုဖြစ်လာစေနိုင်မလဲ ။
Blockchain ဟာ ငွေရေး ကြေးရေးကဏ္ဍမှာသာမဟုတ်ဘဲ အခြားနေရာတွေမှာပါ အသုံးပြုလို့ ရမယ့် နည်းပညာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Libra နဲ့ BitCoin ဆိုတာ Blockchain နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ ငွေသားအစားထိုး Digital Currency တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Libra ကိုတော့ တခြားသောနိုင်ငံတွေရဲ့ ဗဟိုဘဏ်တွေကလက်မခံကြသေးဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိတွေ့နေရတာကတော့ တရုတ်ပြည်၊ စင်ကာနဲ့ အမေရိကန်ရဲ့အချို့ဘဏ်တွေ မှာ နိုင်ငံရဲ့Official Currency အဖြစ်တရားဝင် စတင် စမ်းသပ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ နည်းနည်းစောနေပါသေးတယ်။
နောက်တချက်ကတော့ ပြည်တွင်းဘဏ်လောကမှာ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အဓိက စိန်ခေါ်မှုက ဘာတွေဖြစ်မလဲ ။ အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးပြုလုပ်လာတဲ့ CB Bank အနေနဲ့ရော အဓိကအခက်အခဲက ဘာတွေဖြစ်မလဲ ။
နိုင်ငံတော်အစိုးရ နဲ့ ဗဟိုဘဏ်ကဦးဆောင်ပြီးတော့ ဘဏ္ဍာရေးလောက တိုးတက်လာဖို့ အတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (Regulation ) တွေကို စတင်ပြီးချမှတ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို Regulation တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီဖို့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကနေပြီးတော့ ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှု တချို့လည်းရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်လုပ်ငန်းဟာ ကာလတိုအတွင်းမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် မို့လို့ Expert နဲ့ လိုအပ်တဲ့ Talent တွေ(လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ) ရဖို့အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်။ CB Bank အနေနဲ့ကတော့ နိုင်ငံတကာက တတ်သိနားလည်တဲ့သူတွေ (Expatriate) ကိုလည်း ခေါ်ယူထားတဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို စနစ်တကျသင်ကြားပေးပြီး အရည်အသွေးပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
အခုဆို ပြည်တွင်းဘဏ်အများစုက SMEs လုပ်ငန်းတွေ ၊ အိမ်ရာချေးငွေ နဲ့ အရစ်ကျစနစ်တွေလို ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဦးစားပေးလုပ်လာကြတာ တွေ့တယ်။ CB အနေနဲ့ရော ဘယ်လို
အစီအစဉ်တွေရှိထားပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးနေလဲ ။ အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေကရော ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
SMEs၊ အိမ်ရာချေးငွေ နဲ့ အရစ်ကျချေးငွေဝန်ဆောင်မှုတွေကို CB Bank က ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ CB Bank အနေနဲ့ လည်း နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ KfW၊ JICA အစရှိတဲ့ Organization
တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ SME လုပ်ငန်းတွေ တိုးတက်စေဖို့ Financing တွေ၊ Loan တွေ ချေးငွေတွေကို ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ SME တွေ အာမခံမပါဘဲ ချေးငွေရနိုင်တဲ့ ဒီ
Credit Guarantee Insurance Loan တွေ ပေးခဲ့တာ ရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဆရာ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရ ဖြည့်စွက်ပြီး ဘာပြောချင်လဲ ။ လက်ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးကိုရော ဘယ်လို မြင်မိလဲ ဆိုတာလေးလည်း ပြောပြပေးခဲ့ပါဦး ။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုက ကောင်းတဲ့ဘက်က သွားနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့GDP Growth က အခြားအာဆီယံ နိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အရမ်းကို တောင့်တင်း
ခိုင်မာနေတာကို တွေ့ရတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းအပါအဝင် မြန်မာ့စီးပွားရေး ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကို Foundation ခိုင်ခိုင်မာမာ နဲ့တိုးတက်အောင် အစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်နေတာကို
တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကောင်းဘက်ကို သွားနေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘဏ်လုပ်ငန်းအနေနဲ့လည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းတိုးတက်လာအောင် နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။
Previous articleInvestments by Foreign-Owned, JV Insurance Firms Top $127 Million
Next articleMyanmar Goods to Get Own Barcodes